China Beauty Eye Makeup 48 Colour Custom Label Eyeshadow Palette စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Weiti
၁၊ ၄၈ အရောင်များစိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် eyeshadow palette
အရောင် ၄၈ ခု
“ Safe & RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ”
EYESHADOW အရောင် ARM စမ်းသပ်မှု
ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောမြေစိုစွတ်သောစိုစွတ်သောနှစ်မျိုးလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီးမုန့်ဖုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ လျှောက်ထားသောအခါ၎င်းသည်တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ မြင့်မားသောပုလဲသည်သတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ Base cream ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်မျက်လုံးအခြေခံခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်နောက်ဆက်တွဲမျက်လုံးမိတ်သဟာယဖြစ်ရန်ကူညီပေးသည်။ မျက်လုံးအရိပ်သည်မတူညီသောစတိုင်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
၁။ အရောင်များနှင့်မိတ်ကပ်ဆိုင်ရာအနုပညာပစ္စည်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရောင်ခြယ်ဆေးအမျိုးမျိုးဖြင့်ပုံသွင်းထားသောအမှုန့်အရိပ်အရောင်များကိုအသုံးပြုထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် smoky မျက်စိမိတ်ကပ်, မင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ်, ပါတီမိတ်ကပ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့မိတ်ကပ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော
၃။ တောက်ပသောအရောင်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးလုံခြုံရေးပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများသည်တစ်နေ့လုံးကြာရှည်ခံနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ကင်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်သင့်အရေပြားကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ သင်လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်ကျန်းမာရေးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများ! သင်၏မျက်နှာကိုမထိခိုက်စေပါ
4. အရောင်အသွေးနှင့်ရောစပ်ရောစပ်နိုင်သော: အမှုန့်သည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့။ အလွန်ကောင်းသောအရောင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အမှုန့်သည်မကွဲပါ။ ညင်ညင်သာသာထိတွေ့, အရောင်ချက်ချင်းတောက်ပတောက်ပ။ အလွယ်တကူကိုက်ညီပါ၊ အလှဆုံးမိတ်ကပ်ကိုရရှိပါ။
(၅) ကြာရှည်ခံသည် Mineral oil base သည်သင့်အရေပြားကိုမထိခိုက်စေဘဲနူးညံ့ချောမွေ့သောကြာရှည်ခံစေသောအချက်များဖြင့်ချောမွေ့။ ချောမွေ့သည့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ပြင်းထန်သောမိတ်ကပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပေး၍ သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
အကောက်ခွန်ပုဂ္ဂလိကလိုဂို EYESHADOW Palette
အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းများကို eyeshadow palette ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းလိုဂိုအတွက် 3D UV ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူတိမ်ခြင်း (ရွှေသတ္တုပါး၊ ငွေသတ္တုပြား၊ အဖြူရောင်သတ္တုပြား၊ နှင်းဆီရွှေသတ္တုပါးစသည်တို့) ရှိသည်။
EYESHADOW Palette ထုတ်လုပ်မှု
ရှေ့သို့ Private Label အမှတ်တံဆိပ် ၃၇ အရောင်များ Glitter Acrylic ရေငုပ်ခြင်းလက်သည်းဆိုးဆေး
နောက်တစ်ခု: လက်လီ Glitter စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တံဆိပ်ကော်ကော် Eyeliner ခဲတံ
Eyeshadow Palette စိတ်တိုင်းကျ
Eyeshadow Palette ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်
Eye Shadow Palette ကိုပြုလုပ်ပါ
OEM စက်ရုံလက်ကားများစိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် ...
Magic Liquid Eyeliner၊ ကော်လီနာများအတွက် Norma အတွက် ...
မျက်စိကွန်း, မျက်ခုံးများ, မျက်လုံး, Eyelash ရောင်းချသူ, mink ကြိမ်ဒဏ်, Eyelash Extensions များ,